Mazano Okuvaka NeSalalt Iyo Ichakuchengetedza Kubva kuMarware
Malware inoreva zvipembenene zvinoparadzirwa kumakombiyuta kuburikidza nekushandiswa kwekombiyuta. Mune rimwe shoko, iyo ipfupi purogiramu yakaipa, iyo inogona kukanganisa kombiyuta. Nokudaro, inoshanda sehosha inoparadzirwa nevashambadzi.
Ponemon Institute yekuongorora inoratidza kuti inenge makumi mashanu nemashanu kubva muzana yemarware inogara mu internet browser. Zvechokwadi, zvinokwanisika kune vaseki kuti vawane ruzivo rwebhengi rako pachako paunenge uchitsvaga muyero. Nokudaro, zvakakosha kuti nguva dzose dzigadziridzwe yekombiyuta software kuti irege kudzivirirwa - nordexx renkaat saksasta.
Alexander Peresunko, the Semalt Mutungamiri Akabudirira Mutevedzeri, anopa kuenzanisa izvi kusvika pamakore ekutanga 90 kusvika kune imwe yemazuva ano, iyo inonyanya kudzivirira. Nokudaro, zvakafanana kune kombiyuta yepurogiramu, uye inoda nguva yekudzokorora.
Rangarira Rakeri semuenzaniso
Mukadzi uyu amai vane vana vaviri vanorumbidzwa kubva kuchamhembe kweSydney. Anonyatsozivikanwa nekombiyuta asi anokundikana kugadzira browser yake software. Anopupura nezvekudzivisa kukosha kwekuvandudza kombiyuta yake yekushanda pasinei nekugara achikurudzira. Semugumisiro wekuchengetedza hurongwa hwekare, akaita kuti zvive nyore kune vaseki kuti vaise malware mune kombiyuta yake uye vakamutora zvido zvake. Uyezve, anobvuma nokucherechedza zvinyorwa pasina kubvumirwa..Muenzaniso wake uri pakati pezvinyorwa zvechokwadi zvekuti vatengesi vanoshandisa sei malware. Semuenzaniso, hurumende yeAustralia inofungidzira kudiwa kwekunyorwa kwekombiyuta pane zvehupfumi kuva 1,65 mabhiriyoni US $
Kune nguva dzose nzira yekubuda
Pasinei nedambudziko rekunyorwa kwekombiyuta, kune nzira yekubuda pamutengo muduku kuti uone kuti deta yako haina kukanganiswa chero ipi zvayo. Chokutanga, tine Identity Watch vadzidzisi vanonzwisisa software yakaipa kupfuura yevaHckers. Vanoshanda kuburikidza nekugara vakashanda pawebhu kuti vaone kana mhombwe dziri kutora mashoko evanhu. Saka, munhu wose anoda kuita ndekutevera matanho mashomanana ayo achazoita kuti kombiyuta yake igare yakachengetedzwa kubva kune vanotengesa uye zvimwe zvinogona kutyisidzira. Zvitengesi zvedu ndezvakanakisisa naizvozvo hapana kunyanya kunetseka, sekufunga kuti hurongwa hwako hwakachengeteka.
Nhanho nhatu dzinokosha dzinosanganisira kutanga nekunyora ku Identity Watch, ino inova danho rokutanga rekuchengetedza kombiyuta yako. Chechipiri, tevera kuenzanisira nekuvandudza purogiramu yekushanya pakarepo asi kwete gare gare. Zvadaro, iva nechokwadi chokuti password yaunoshandisa yakasimba zvakakwana uye yakachengeteka. Inoreva kuti haisi kupa nzvimbo dzepaswedi dzakadai sezita remhuri, kana zuva rekuberekwa uye kunyange, mazita ako. Izvi zvinogona kuburikidza nokutaura, uchishandisa izwi rinosanganisira tsamba huru, tsamba duku uye hazvibviri kuti chero munhu afunge. Izvozvo zvicharatidza kuguma kwekuchengetedza kombiyuta yako.
Identity Watch inosimbisa vatengi vekuchengetedza kombiyuta yavo nekupa maitiro ekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwepurogiramu. Mazana emakore ekupedzisira anowanzokwira mumakombiyuta gurus, uye saizvozvo vanokuvadza, izvo zvinoreva kuti tinoda kupa zvakanakisisa kuchengeteka hakuna mumwe angapfuura. Pakupedzisira, nekusayina kuIdentity Watch, mumwe haagoni kukanganwa nezvekombiyuta yake kuchengeteka zvakare.